७० भन्दा ६ कम मन्त्री कुस्ती खेल्नलाई हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ? – Etajakhabar
७० भन्दा ६ कम मन्त्री कुस्ती खेल्नलाई हो, प्रधानमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं -एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्बाेधनकाे धेरै समय कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीलार्इ प्रश्न गर्नमा खर्चे । ओली भने, ‘आज रुपान्तरित संसद्को अन्तिम दिन र खुशीको दिन । यो संसद्ले एक र महत्वपूर्ण काम गर्यो । संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसक्यो । संक्रमणकाल टुङ्ग्याउने क्षणमा पुगेका छौं । यो संसद्ले संस्थाले गर्नु पर्ने काम कुशलतापूर्वक गरेको छ ।
थप मन्त्री किन चाहियो ? ७० भन्दा छ कम मन्त्री बनाएर कुस्ती खेल्नलाई ? निर्वाचन गराउँन त तीन जना मन्त्री भए पुग्छ । सभापतिलाई प्रतिशतको हिसाव बुझाउने कोही छैन पार्टीभित्र ?
आचारसंहिताको विपरित भयो भनेर संवैधानिक निकायले तीन पटक पत्र काट्यो । कानून माननु पर्दैन ? कतिपय साथीहरु मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ तर, कानून बमोजिम भए पो बधाई दिनु ? सरकार कानून भित्र बस्नु पर्छ, कानून विपरित काम गर्न पाइदैन् । कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नु हुन्छ ‘लोकतन्त्रमा कानून मान्नु नपर्ने हो ?
तस्बिर : अमुल थापा / नयाँ पत्रिका केही समयअघि कानूनको पालना गरिन्छ भनेर हस्ताक्षेर गरि बाहिर आयौं । आउन्ने बित्तिकै कुदेर ८ जना मन्त्री थप्नु भो । आज भेट भयो ‘ उहाँको छटपटी देख्दा कानून विपरित काम गर्नू भो भन्ने मैले थाहा पाए । मैले राष्ट्रपतिलाई पनि भने । तपाई पनि यहाँ भन्छु । चिप्लेर मन्त्रीहरूकाे नाम गयाे, कहिलेकाँही यस्तो हुन्छ । यो फिर्ता लिनुस् ।
सुन्नमा आएको छ, सरकार अल्पमतमा पर्छ भन्ने सुनिन्छ । अब संसद् छैन् । मत र अल्पमत, यो बाहाना हो । तपार्इ बहाना बनाउँदै हुनुहुन्छ । संसद समाप्त भएपछि के के गर्दै हुनु हुन्छ ? भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । माओवादीका मन्त्रीलाई विना विभागिय बनाउने, आफ्ना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने आदि..
माओवादीले साथ छोडेन र छोडेको पनि छैन् । कोही कोही मिल्दा हुने कोही मिल्ला भुइचालो जाने इपि सेन्टर पनि कहाँ हो ?अाजसम्म एमालेलार्इ दाेस्राे दल भन्नु पथ्र्याे, अब एक लौटी प्रमुख दल हो एमाले । पार्टीको तर्फबाट भन्दा सरकारलाई चुनाव गराउन पूराका पूरा सहयोग रहन्छ हाम्राे । प्रधानमन्त्रीले सुन्ने गरी, सरकारले सुन्ने गरी भनेको ‘ एमालेले कानूनको पालना गर्छ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
लाेकतन्त्रका लागि लामो समय बलिदानपूर्ण संघर्ष गरौं । एउटै संविधानमार्फत एउटै प्रणालीमा समाहित भएका छौं । एमालेले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेर आएको छ र पूर्ण प्रतिवद्ध छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, आश्विन २९, २०७४ समय: ६:४६:५३
‘आशाको दियो निभ्यो’ “छुट्टी सकिएपछि अब फेरि त्यही कोठामा गएर बस्नु छ, साथीको पलङ्ग खाली हुनेछ, कसरी मन बुझ्ने हो थाहा छैन।”